Sweating – Healthy Life Journal
All posts tagged "Sweating"
လရိပ်မေ အရေပြားဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ချွေးများများထွက်အောင် လှုပ်ရှားမှုလုပ်တာက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက တချို့ကောင်းကျိုးတွေကတော့- • နှလုံးသွေးကြောရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ • ဝနေသူတို့အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းပေးခြင်း၊...
ခေါင်းချွေးအထွက်များတယ် . . . .
မေး ။ ခေါင်းချွေးထွက်များတာ ဘာဆေးသောက်ရင် ကောင်းမလဲ။ Soe Min Aung (FB) အယ်ဒီတာအဖွဲ့ မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ ခေါင်းချွေးထွက်တာ သက်သာစေဖို့ ရေများများသောက်ပါ။ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားပါ။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်လက်တွေ အမြဲစိုစွတ်ပြီး စေးကပ်နေပါသလား။ လက်တွေစိုစွတ်စေးကပ်တာက တကယ်ကို မသက်မသာဖြစ်စရာ အခြေအနေပါ။ ချွေးထွက်များတဲ့အခြေအနေအတွက် စိတ်ရှုပ်လေလေ၊ ပိုချွေးစေးပြန်လေလေပါ။ ဒါကြောင့် ဒီအခြေအနေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ သဘာဝကုထုံးတွေကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ သဘာဝဆေးနည်း (၁)...
မိုးအေးလည်း ခေါင်းချွေးထွက်တယ် . . .
ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် မှ ဖြေကြားပေးပါသည် Q. သားက မိုးအေးလည်း ခေါင်းက ချွေးအမြဲထွက်တယ်၊ စိုးရိမ်ရလားဆရာ။ Kokhank (Fb) A. ခေါင်းချွေးထွက်တာ သက်သာစေဖို့ ရေများများ သောက်ပါ။ အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များများစားပါ။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။ အဝမလွန်ပါစေနဲ့။...
လူကြားထဲသွားတိုင်း ချွေးနံ့ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေဖို့ . . .
၊ လရိပ်မေ ၊ ချွေးထွက်တဲ့ဂလင်းတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ချွေးထွက်များသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်နံ့နံတတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အနံ့က အလွန်ဆိုးနေရင် အနံ့နံတာကြောင့် လူမှုဆက်ဆံရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ချွေးထွက်များတာက စိတ်မသက်မသာဖြစ်စရာကောင်းသလို ချွေးထွက်များတာကြောင့် အရေပြားပေါ်က ဘက်တီးရီးယားနဲ့ထိတွေ့ပြီး အနံ့ဆိုးထွက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နံ့သင်းပျံ့နေစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။...
မေး. ခေါင်းချွေးပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေရှိရင် သိချင်လို့ပါဆရာ။ စန်းစန်းဝင်း (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ခေါင်းချွေးထွက်တာ သက်သာစေဖို့ ရေများများသောက်ပါ။ အဟာရပြည့်ဝတဲ့ အသီးအနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားပါ။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပါ။ အဝမလွန်ပါစေနဲ့။ နံနက်စောစော ချွေးများများထွက်တဲ့အထိ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။ ပူစပ်လွန်းတဲ့စားစရာ၊...
ညဘက် ချွေးထွက်များရသည့် အကြောင်းရင်းများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အရင်တုန်းကနဲ့မတူဘဲ ညဘက်မှာ ချွေးထွက်များနေပါသလား။ အောက်ပါအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (၁) သွေးဆုံးခြင်း သွေးဆုံးချိန်မှာ ညဘက် ပူစပ်ပူလောင် ဝေဒနာဖြစ်ပြီး ချွေးထွက်များတတ်ပါတယ်။ သွေးဆုံးအကြိုကာလမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ ညဉ့်လယ်မှာ ချွေးထွက်များပြီး လန့်နိုးလာတတ်ပါတယ်။ (၂)...
ချွေးထွက်များတယ် . . .
မေး. ကျွန်တော်က ချွေးထွက်များပါတယ်။ ဘယ်လို အစားအသောက်တွေစားရင် ချွေးထွက်တာကို ပိုအားပေးပါသလဲ။ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ စားသောက်ပေးသင့်ပါသလဲ။ ကိုမြင့်ဝင်း၊ တာမွေ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ကာနစ်တရပ်စ်ဓာတ် များများပါတဲ့ အစားအသောက်တွေစားရင် ချွေးထွက်များပါတယ်။ ချွေးထွက်များတဲ့သူတွေက သံပရာရည်...
ချွေးထွက်များတဲ့ အမျိုးသားတွေ အနံ့မထွက်စေဖို့ . . .
ကိုမိုး အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအနံ့ဆိုး ထွက်နေရင် လူကြားထဲလှုပ်ရှားသွားလာရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားစိတ်လျော့ကျသွားတတ်ပါတယ်။ ပူပြင်းချိန်မှာ ချွေးထွက်များတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အနံ့ဆိုး ထွက်တတ်တဲ့အတွက် အထူးဂရုစိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိ်ု ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ (၁) ရေမှန်မှန် ချိုးပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သန့်ရှင်းအောင်နေတာက ကိုယ်နံ့ဆိုးတဲ့...